Photocall TV, waa ikhtiyaar xiiso leh oo laga daawan karo DTT meel kasta | Laga soo bilaabo Linux
Joaquin Garcia Cobo | | Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dhibaatada ka dib COVID-19, isticmaalka iyo isticmaalka madadaalada internetka ayaa si aad ah u kordhay. Kordhintu waxay ahayd in badan oo ka mid ah shirkadaha adeegyadan ay ahayd inay kordhiyaan ilaha adeegyadooda isla markaana yareeyaan tayada gudbinta waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Waxa u muuqda sheeko fudud ayaa hadda noqotay isbeddel sii socda oo sii kordhaya. Adeegyada iftiiminta sida Photocall TV ama Pluto TV, iyo kuwo kale.
Telefishinka internetka waa sheyga xiddigga ee madaddaalada dijitaalka ah, oo muujineysa adeegyada filinka qulqulka, laakiin iyagu ma aha kuwa keliya. Bilihii la soo dhaafay, adeegsiga barnaamijyada iyo barnaamijyada websaydhka oo ka kooban ku soo bandhig DTT iyo kanaalada khaaska ah khadka tooska ah bilaash, inta badan. In kastoo in badan oo idinka mid ahi ay dhihi doonaan inay la mid tahay waxa Telefishankeennu na siiyo, runtu waxay tahay in adeegyadani ay noo oggolaadaan ka eeg waxyaabaha ku jira qalab kasta iyo sidoo kale waxay naga caawineysaa inaan yareyno tirada xayeysiiska ee ku jira waxyaabaha ku jira.
1 Waa maxay Photocall TV?
2 Waa kuwee kanaalada aan ka daawan karo TVc Photocall?
2.2 Caalami ah
2.3 Kuwa kale
3 Sidee Photocall TV u shaqeeyaa
3.2 Ku rakibida
3.3 Sida loo duubo barnaamijyada
4 Sida loo arko TV-ga Photocall ee Telefishankeenna
4.3 Khaanadaha Telefishanka
4.5 Beddelaad bilaash ah oo loogu talagalay Photocall TV
4.9 eFilm iyo barnaamijyada TV-ga
Waa maxay Photocall TV?
Bilihii la soo dhaafay, codsiyo badan ayaa loo sameeyay si loogu daawado DTT iyo kanaalada kale bilaash, laakiin nasiib daro dhammaan codsiyadaani maahan nolol dheer ama si sax ah ayey u shaqeeyaan. Si kastaba ha noqotee, barnaamijka TV-ga ee loo yaqaan 'Photocall TV' si sax ah ayuu u shaqeeyaa, isagoo durba haysta nolol aad u tiro badan. TV -ga Photocall waa adeeg telefishan socodsiinaya gebi ahaanba sharci ah oo bilaash ah kaas oo baahinaya kanaalka DTT ee furan.
Photocall TV sidoo kale waxaa lagu soo daray adeegyo taxane ah oo ka baxsan daawashada filimada, taxanaha ama barnaamijyada ku baxa luqado kala duwan. Marka lagu daro awooda inaad ku daawato DTT aalado kala duwan, Photocall TV ayaa noo ogolaanaya ka dhagayso kanaallada adigoo adeegsanaya qulqulka, Kanaalada DTT caalami ah, Kanaalada DTT ku takhasusay mowduucyo kala duwan, hal Hagaha TV-ga ee barnaamijyada iyo jadwalkooda iyo isku darka adeegyada VPN si ay u awoodaan inay ka wada dhex arkaan labada wadan kanaalka iyo wadan kale.
Photocall TV wuxuu leeyahay nooc web iyo barnaamij loogu talagalay Android, xilligan abkan ma sii shaqeynayo laakiin nooca webka ayaa wali la jaan qaadaya aaladaha. Hadda ka dib, adeeggu waa mid la jaanqaadi kara kordhinno kala duwan iyo adeegyo ku jira taleefannada casriga ah, kiniiniga, telefishanka casriga ah iyo biraawsarka internetka. Tani waxay ka dhigan tahay inaan ka daawan karno qalab kasta oo aan lahayn dhibaatooyin iswaafajinaya qaab ama astaan ​​gaar ah.
Waa kuwee kanaalada aan ka daawan karo TVc Photocall?
Xilligan waan awoodnaa eeg ku dhowaad dhammaan kanaalka DTT ee IsbaanishkaTani waxay ka dhigan tahay inaan arki karno wadiiqooyinka waaweyn sida La 1, La 2, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro, Mega, Neox, iwm ... iyo sidoo kale kanaallada telefishanka ee gobolka, sida TV3, Telemadrid, ETB ama Kanaalka Sur, isagoo maraya Kanaalka DTT ee shirkadaha wararka sida EuropaPress iyo / ama Kanaalka DTT ee naadiyada kubada cagta sida kanaalka Real Madrid ama kan FC Barcelona.
Kanaallada caalamiga ah ee aan qaybtaan ka heli doonno waa kanaallada dalalka kale ee ka sii daayay DTT ama khadka tooska ah kuwaasna waxaan ka heli doonnaa kanaalkooda ugu muhiimsan ama kanaalada wararka. Marka, tusaale ahaan, waxaan ku leenahay kanaalka BBC-da ee Boqortooyada Midowday (Boqortooyada Midowday), laakiin ma lihin BBC-da Labaad, BBC Saddex ama BBC-da afar idaacadood Si la mid ah ayaa ku dhici doona kanaallada kale ee dalalka kale. Nasiib darrose, waxaan ku arki karnaa kanaalladaas luqadaha asalka ah ee ay ku baahinayaan, Ma lahaan doonno subtitles Ingiriis ah ama tarjumaadooda Isbaanishka ilaa kanaallada ili ay sidaa sameeyaan mooyee.
Qaybta "Kale" waxay ka kooban tahay kanaallo telefishanno mawduuc leh. Kanaalladaani waxay soo if baxeen sannadihii la soo dhaafay illaa iyo hadda waxaa loo haystay adeegyada taleefannada, laakiin Photocall TV wuxuu noo ogolaanayaa inaan daawanno kanaalkan iyadoo aan wax lacag ah ku bixin, inkasta oo aysan wada ahayn. Mawduucyada kanaallahani way kala duwan yihiin, kanaalka laga soo qaado mowduucyada taariikhiga ah ilaa kanaalada mawduucyada ku saleysan ee gudaha, iyada oo loo marayo kanaallada jikada ama kanaalada carruurta iyo dhalinyarada. Intaas waxaa sii dheer, Photocall TV ma ahan oo kaliya inuu soo qaado kanaalka mowduuc kasta laakiin sidoo kale wuxuu ururiyaa kanaalada ugu caansan ee mowduucan ama dhammaan kanaalka DTT ee mawduucaas.
Muddo sanado ah, idaacadaha ugu waaweyn waxay barnaamijyadooda ka sii daayeen internetka. Dareenkan, Photocall TV ma cusbooneysiinayo, laakiin waan tixgelin karnaa taas Qaybta TVc Photocall waa nooc ka mid ah galka idaacadaha ka baxa internetka. Wax waxtar leh haddii aan jecel nahay inaan beddelno idaacadda oo aan dooneyno inaan si dhakhso leh u qabanno.
Sidee Photocall TV u shaqeeyaa
Hawlgalka Photocall TV waa wax iska fudud, laga yaabee inay tahay wax wanaagsan oo codsigani leeyahay. Qayb kasta waa astaamaha leh astaamaha kanaal kasta oo DTT ah. Dhagsii oo waxay noo tilmaami doontaa baahinta kanaalka. Tayada warbaahintu way kala duwanaan doontaa iyada oo ku xidhan kanaalka, laakiin haddii aan xidhiidh xun yeelanno mooyee, waxa caadiga ah waa in la helo barnaamijyada lagu baahiyo xallinta 720 ama 1080. Haddii aan rabno inaan ku laabanno liiska kanaalka, waa inaan kaliya riixnaa badhanka dambe ee biraawsarka webka ama abka iyadoo tan waxaan ku laabaneynaa liiska kanaalka. Haddii aan rabno inaan ka baxno, waa inaan xirnaa tabka biraawsarka webka.
Rakibaadda Photocall TV waa mid aad u fudud, waa inaan furnaa aaladda qalabka shabakadda oo aan aadno kan xiga cinwaanka bogga. Nasiib darrose barnaamijka Android ma sii shaqeynayo markaa hadda waa ikhtiyaarka kaliya ee lagu heli karo adeegga TV-ga Photocall.
Sida loo duubo barnaamijyada
Photocall TV wuxuu ka shaqeeyaa shabakada shabakada tanina waxay noo ogolaaneysaa inaan qabno howlo dheeri ah oo codsiyada kale aysan heli karin ama aysan laheyn. Xaaladdan oo kale waan awoodnaa duub barnaamijyada in lagu sii daayo iyada oo loo marayo Photocall TV iyada oo ay ugu wacan tahay qalab loogu talagalay Chrome oo loo yaqaan 'Stream Recorder' - kala soo bax HLS as MP4. Qalabkaan wuxuu ku darayaa badhan diiwaanka bogga shabakadda. Waxaan bilaabeynaa baahinta barnaamijka ka dib waxaan riixnaa badhanka diiwaanka waxaana duubista barnaamijka la baahinayo bilaabi doonaan. Marka faylka la dhammeeyo, waxaa lagu keydin doonaa dukumiintiyadayada ama meesha aan ku sheegnay "Settings" ee wax lagu daro.
Sida loo arko TV-ga Photocall ee Telefishankeenna
In kasta oo Photocall TV uu yahay codsi websaydh ah, taas macnaheedu maaha inaan u isticmaali karin aalado kala duwan. Marka xigta waanu kuu sheegaynaa sida aan ugu isticmaali karno Photocall TV aalado kala duwan oo la xiriira telefishanka, iyada oo aan la tixgelinayn taleefannada casriga ah, kiniiniga iyo kombuyuutarka, oo aan ka heli karno shabakadda shabakadda sida aan kor ku soo sheegnay.
Qalabka Google ee TV-ga wuxuu si buuxda ugu shaqeeyaa Photocall TV, si uu uga shaqeeyo kaliya waa inaan ku shubnaa shabakadda shabakadda oo mirrrorcastcasting u siinta qalabka Chromecast, taasi waa, waxaan u dirnaa waxyaabaha ku jira qalabka. Dhibaatada kaliya ee adeegsigaani waa inaan hubinno inaan isticmaalno Google Chrome, Chromium ama derivatives. Nidaamkan aan ku habboonayn Mozilla FirefoxMabda 'ahaan, markaa waa inaan bedelnaa biraawsarka xaaladdan oo kale ama aan dooranno inaan ku isticmaalno wax dheeri ah oo noo oggolaanaya inaan muraayad u dhexeyno biraawsarka iyo chromecast. Haddii aynaan haysan kumbuyuutar oo aan ku samaynno kiniin ama taleefan casri ah, waa inaan ku dirnaa waxyaabaha ku jira qalabkan iyo ku calaamadee chromecast sidii dhibic helitaanka.
Haddii aan dooneyno inaan ku ciyaarno waxyaabaha ku jira aaladda telefishanka Amazon, waxaan ku sameyn karnaa laba siyaabood. Midka hore wuxuu adeegsanayaa qalabka sida chromecast ka dibna iyada oo loo marayo barnaamijka wax lagu ridayo u dir waxyaabaha ku jira TVc Photocall Fire TV. Waxaa jira barnaamijyo badan oo noo oggolaanaya in aan muraayad ka dhex samayno kombuyuutarradeena, taleefannada casriga ah ama kaniiniga iyo FireTV sida shaashadda shaashadda ama SendtoScreen ee Fire TV.
Waxaa jira noocyo kala duwan ama aalado sanduuqyo ama minipcs oo ku xira telefishanka ama kormeera oo baahin kara barnaamijyada telefishanka ama adeegyada iyo / ama muusikada TVc Photocall dhamaantood wuu taageeraa. Loogu talagalay, sida Dabka TV, waxaan ku sameyn karnaa shabakad internet. Kuwa ugu badan ee minipcs-yada leh Android oo ah nidaamka qalliinka markaa midkoodna waxaan isticmaali karnaa shabakadda shabakadda ama waan awoodnaa u isticmaal barnaamijyada muraayadda u sameysmada sida xaaladda Fire TV.
Qalabka Apple ayaan asal ahaan lahayn barnaamij TVc Photocall ah, laakiin maadaama uusan hadda shaqeynin, aaladaha Apple waxay la siman yihiin aaladaha Android, tan awgeed waa inaan u isticmaalnaa biraawsarka webka inuu ku ciyaaro waxa ku jira. Ku qaabka ugu dambeeyay ka mid ah qalabkan Apple wuxuu u oggolaanayaa isdhexgalka iPhone-keena sidaas waxaan ka ciyaari karnaa taleefanka casriga ah oo aan u diri karnaa Apple TV ama waxaan ka ciyaari karnaa TV-ga Apple-ka oo aan u adeegsan karnaa iphone-keena sida kontoroolka fog. Maxaad doorbideysaa.
Beddelaad bilaash ah oo loogu talagalay Photocall TV
Sidii aan ku sheegnay bilowgii, madadaalada internetka ayaa kordhay bilihii la soo dhaafay taasna waxay ka dhigtay Photocall TV kaliya guul ma ahan laakiin sidoo kale adeegyada kale si guul leh ayey u guuleystaan waxaana isticmaala kumanaan qof. Waa kuwan qaar ka mid ah beddelaadaha jira oo loo isticmaalo halkii laga isticmaali lahaa Photocall TV:
Adeegani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan tan iyo markii ay bixiso barnaamij loogu talagalay Android iyo Apple TV iyo, sida Photocall TV, waxay ku bixisaa bilaash. Si kastaba ha noqotee, waxay dhibaato ku leedahay Photocall TV waana taas TV-ga Pluto wuxuu kaliya bixiyaa hal kanaal TV oo leh mowduucyo kala duwan oo mawduucyo kala duwan ahLaakiin ma bixiso waxyaabaha caalamiga ah ama helitaanka raadiyaha. Qodobka wanaagsan waa in haddii ay ku habboon tahay macruufka iyo qalabkeeda, ay leedahay barnaamij aan ku daawan karno waxa ku jira.
In muddo ah hadda, dadka isticmaala Gnu / Linux waxay leeyihiin ikhtiyaar aad u xiiso badan oo ku soo kordhay oo aan ahayn oo keliya beddelka Photocall TV laakiin sidoo kale la tartan Netflix laftiisa madal kasta. Adeeggan waxaa lagu magacaabaa Plex.
Plex waa adeeg iyo softiweer lagu rakibay server-kaaga iyo inagoo wadajirna faa'iidooyinkeeda waan awoodnaa hel caado netflix baahin kara idaacadaha iyo kanaalada DTT, dhammaantood si gaar ah oo shakhsi ahaaneed annaga ayaa iska leh. Dhibaatada nidaamkan ayaa ah inaan u baahanahay inaan helno server gaar ah oo noqon kara kombiyuutarkeena ama minipc fudud.
Suurtagalnimada ka daawo kanaallada DTT khadka tooska ah adoo adeegsanaya liiska IPTV. Liiska liistadaani waa sida liiska 'Spotify'. Dhinaca kale waa in mowjadaha qaarkood iyo Cinwaanada kanaalka IP-ga badiyaa way is beddelaan ka dibna kanaalada lagu daro liisaskan ayaa joojiya shaqada. Qodobka wanaagsan ayaa ah inaan u isticmaali karno liisaskan qalab kasta tan iyo markii ciyaartoy badan, labadaba Android iyo iOS, ay ku habboon yihiin iyaga. Xitaa bandhigyada caanka ah VLC y Kodi waxay leeyihiin ikhtiyaar ay ku ciyaaraan liisaskan TV-ga ah.
eFilm iyo barnaamijyada TV-ga
Waxaa jirta suurtagalnimada in gacmaha lagu sameeyo adeegyada TV-ga Photocall, taas oo ah, waxaan aadeynaa websaydhada kanaal kasta oo TV ah waana daawanaa ama waxaan kala soo baxnaa barnaamijka rasmiga ah oo aan ku dhex aragnaa. Qodobka taban ee tan ayaa ah inaan u baahan doono inaan rakibno in kabadan 100 barnaamij hadii aan rabno inaan helno mid lamid ah Photocall TV, adigoon ilaawin dhibaatooyinka amni ee aan la yeelan karno. Qodobka togan ayaa ah inaan si toos ah u daawan doono kanaalka oo munaasabado badan aan awoodi doonno inaan daawano barnaamijka markasta oo aan rabno. Adeegga Akhriska Dadweynaha ee Dowladda Spain ayaa la bilaabay bilooyin filim bilaash ah iyo adeeg deyn taxane ah. Adeegga ayaa loo yaqaan Filim. Adeegani wuxuu ku dhex jiraa eBiblio waxayna na siineysaa buugaagta filimada, dukumiintiyada iyo taxanaha balaaran, laakiin waa inaan helno eBiblio. Waxa ugu fiican ee adeegani waa taas waxaan ku haynaa waxyaabo xayeysiis la'aan ah qalab kasta. Waxa xun ee ku saabsan waa in aan heysanno oo kaliya 7 maalmood ka dibna waa inaan cusboonaysiinnaa haddii aan dooneyno inaan mar kale aragno. Intaas waxaa sii dheer, lbarnaamijyada moobiilka badanaa ma fiicna in kastoo ay u jiraan labadaba Android iyo iOS.
Muddo dheer, xitaa kahor xiisadda COVID19, waxaan ku isticmaali jiray adeegyo telefishin dijitaal ah ama telefishan si toos ah. Waxay umuuqataa horumar aniga iyo Waxaan u arkaa inay ka faa iid badan yihiin isticmaalka kanaallada TV-ga, maxaa yeelay waxyaabaha kale waxaad keydisaa xayeysiiska. Laakiin marka lagu daro, adeegyadan ayaa kuu oggolaanaya inaad marin u hesho barnaamijyo haddii kale aadan awoodi karin inaad gasho, sida kanaalada mawduucyada ama kanaallada caalamiga ah. Nasiib darrose, inbadan oo ka mid ah adeegyadani waxay la xiriiraan barnaamijyada hacker-ka ama codsiyada sharci-darrada ah midna iyo midka kale toona. Uguyaraan Photocall TV iyo waxa aan isku dayay. Waxa aan ugu jeclaa TVc Photocall waa uumiga waxyaabaha ku jira kaliya seddex bog. Sidii diiwaanka TV-ga iyo in dhammaantood si sax ah u shaqeeyaan, ma arki doontid wax qalad ah oo ku jira waxyaabo khaldan ama aan jirin, haddii webku si xun u shaqeeyo maxaa yeelay wuxuu leeyahay isticmaaleyaal aad u tiro badan, oo mararka qaarkood dhaca.
Waxaas oo dhan waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho adeeggan, marka lagu daro, hadda oo leh cimilo wanaagsan iyo ciidaha, Photocall TV waa ikhtiyaar wanaagsan oo aan lagaa buuxin telefishankaWaxaan u baahan doonaa oo kaliya kaniiniga ama casriga laftiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Photocall TV, waa ikhtiyaar xiiso leh oo laga daawan karo DTT meel kasta
JUAN Reyes WARRIOR dijo
Maqaal aad u fiican. Waxaan jeclaan lahaa inaan horay u arkay tan, waan jeclaa… gaar ahaan markii ay ahayd Koobkii Ameerika ee daawashada ciyaaraha. Waan jeclahay degelkan.
Hoog ka yimid Kolombiya
Ka jawaab JUAN REYES GUERRERO
Aad baad ugu mahadsan tahay akhrintaada. Waan ku faraxsanahay inaad u aragtay inay waxtar leedahay in kastoo aan soo daahay, laakiin hey, Koobka Ameerika ma joogsanayo, waad isticmaali kartaa marka xigta. Wanaagsan !!!
Jawaab ku samee Joaquin García Cobo
Juan Reyes Guerrero oo ka yimid Elizondo dijo
Waad ku mahadsan tahay jawaabta… Waxaan booqday baloogga tan iyo markii aan bilaabay Ubuntu 14.04
Jawaab Juan Reyes Guerrero oo ka socda Elizondo
Caadi ahaan waxaan adeegsadaa barnaamijka keenaya Linux distro -ka aan ugu jeclahay waxaa la yiraahdaa Hypnotix, waan jeclahay casharrada noocan ah aad baad ugu mahadsan tahay sidaad u samaysay, waxaan kaaga tagay caaro leh abaalmarino geesinimo leh waxaan rajaynayaa inay ku gaadhay ^^
Ku jawaab richo
CBL-Mariner, qeybinta Linux ee Microsoft wuxuu gaarayaa nooca 1.0